Laboratory Washer, Chekutanga Chizvarwa Machine, Module - Xipingzhe
XPZ ine timu yehunyanzvi ine ruzivo rwakawanda mukutsvagisa nekusimudzira. Isu tiri vatengesi vakuru kuChinese ekuongorora zviremera nemakemikari emakambani, zvakadaro, XPZ brand yakapararira kune dzimwe nyika zhinji, seIndia, UK, Russia, South Korea, Uganda, Philippines nezvimwewo ..
XPZ, kumisikidza nyowani indasitiri zviyero.
NAYE DZIMWE NENYIKA NZIRA.
Kubva pakusarudza nekugadzirisa kurudyi
muchina webasa rako kubatsira iwe mari yekutenga iyo inogadzira zvinoonekwa purofiti.
Laboratory glassware Washer pamwe conductivity M ...
Otomatiki Laboratory Glassw ...
Benchtop pesin pamwe otomatiki kuvhura uye kuvhara ...
Benchtop pesin Makuriro Ap ...
Undercounter FlaskScrubber Glassware Washer zvaiti ...
Undercounter guchu Scrubber ...
Three nhanho glassware washer pamwe Modular bask ...
Matatu nhanho magirazi ekuwachisa ...
Laboratory pesin pamwe mvura yokuparadzira inopisa ai ...
Laboratory pesin pamwe liqu ...
Laboratory pesin ane madhoo maviri anogona kuvhura muna cl ...
Laboratory pesheni ine maviri ...
Laboratory giraziware washer Smart-1
Smart-1 Chigadzirwa Tsananguro ...
Laboratory glassware washer pamwe inopisa mhepo nokuomesa ...
Chigadzirwa Chigadzirwa: Smart -...
XPZ inotungamira kugadzirwa kwema laboratory glassware washer, iri muHangzhou China. XPZ inonyanya kutsvagisa, kugadzira uye kutengesa iyo otomatiki giraziware washer inoiswa kuchikafu, kurapwa, kuongorora kwezvakatipoteredza, kuongorora kwemakemikari uye mhuka dzemurabhoritari ..
Rabhoritari ine module nyowani, usaite chikonzero chekutya yakawanda bvunzo chubhu kana mapipi
Aug / 06/2020
Chinhu chinowanikwa kwese murabhoritari ndeyezvombo zvakasiyana zvekuyedza. Mabhodhoro uye magaba, akasiyana maratidziro, uye mashandisirwo akasiyana anowanzoita ekuchenesa vashandi pakurasikirwa. Kunyanya kuchenesa kwepipettes uye kuyedza machubhu mugiraziware kunogaro ita kuti vanhu vachenjerere. Sezvo vazhinji vanoshanda ...
Cherekedza pakushandiswa kwerabhoritari girazi, chii chauri kufuratira
Ding, ding, bang, yakaputsa imwe, uye ichi ndicho chimwe chezvishandiso zvakajairika murabhoritari, magirazi. Kuchenesa magirazi uye kuomesa sei. Pane zvakawanda zvaunofanira kuteerera panguva yekushandisa, iwe unoziva? Iko kushandiswa kweyakajairwa giraziware (I) Pipette 1. Kurongwa: Imwe chete mamaki pombi ...
Mhedzisiro yekuyedza inogara isina kururama here? Chinokosha kuita zvinhu izvi zvakanaka
Nekuvandudzwa kwehupfumi pamwe nenzanga, kuitira kuzadzikisa zvidikanwi zvakasiyana, saka maindasitiri kana minda senge CDC, kuyedza chikafu, makambani emishonga, masainzi ekutsvagisa, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, sisitimu yemvura, masisitimu petrochemical, masystem emagetsi, nezvimwe zvese ...
Iyo inoverengeka coronavirus denda iri kuenderera ichipararira, mamwe marapuratifomu ezvekurapa anotanga kushandisa otomatiki rabhoritari washer
Chirwere chehosha chakatanga mukati megore ra2020 chine ngozi kuhutano hwevanhu vese. Iyo inoverengeka Coronavirus kubuda kwakakonzera kudarika mamirioni matanhatu hutachiona mupasi rose. Vanopfuura vanhu mazana matatu ezviuru vakafa, uye nyanzvi zhinji hadzina tarisiro yekuti denda richapera munguva pfupi ...
Marabhoritari maridzi anofanirwa kucheneswa sei
Chivabvu / 26/2020
Vashandisi vanofanirwa kunzwisisa kuti kuchengetwa kwechiridzwa uye kugadzirisa ihwohwo hunyanzvi hwekutanga. Nekuda kwekuchengetedza zviridzwa zvakanaka, zvine chekuita neyakaenzana chiyero chechiridzwa, mwero wekushandisa uye nehukuru hwebudiriro yedzidziso yekuyedza, nezvimwewo Naizvozvo, kubvisa guruva uye kuchenesa ndizvo zvakakosha zve ...